Learning English Archives - Cuddle Me to Read
Actual နဲ့ Actually ကို ဘယ်လိုသုံးမလဲ
Actual က အမှန် (real) လို့ အဓိပ္ပါယ် ရပါတယ်။ Actually ကတော့ “တကယ်က”၊ အမှန်ကတော့လို့ အဓိပ္ပါယ် ရပါတယ်။ ဒီနှစ်ခုလုံးကို (၁) မှားယွင်းတဲ့ အချက်အလက်တွေကို အမှန်ပြင်တဲ့ နေရာမှာ သုံးပါတယ်။ ဥပမာ။ The book says he was 47 when he died, but his actual age was 43.“Hello John. Nice to see you again”. “Actually, my name is Richard”. (၂) မထင်မှတ်တဲ့ အချက်အလက်၊ ကိစ္စ၊ အကြောင်းအရာ တစ်ခုခုကို ပြောဆိုရင်လဲ သုံးပါတယ်။ဥပမာ။“Have …
Actual နဲ့ Actually ကို ဘယ်လိုသုံးမလဲ Read More »
Across နဲ့ Through ဘယ်လိုသုံးမလဲ
Across နဲ့ through နဲ့ ဘယ်လိုကွာသလဲ ဆိုတော့ on နဲ့ in ကွာသလို ကွာပါတယ်။ Across ကို မျက်နှာပြင် ပေါ်မှာ တစ်နေရာက တစ်နေရာကို ဖြတ်သွားတဲ့ အခါမျိုးမှာ သုံးပါတယ်။ We walk across the ice. (ရေခဲပြင်ပေါ် လမ်းလျောက်သွားတာ ဖြစ်လို့ across ကိုသုံးပါတယ်။)I walk across the square to the tea shop. (ရင်ပြင်ပေါ်က ဖြတ်လျှောက်သွားတာမို့ across ကို သုံးပါတယ်)We drove across the desert.(သဲကန္တာရ ပေါ်က ဖြတ်ပြီး ကားမောင်းသွားတာမို့လို့ across ကိုသုံးပါတယ်) Through ကိုကျတော့ ဘေးပါတ်လည်မှာ …
Across နဲ့ Through ဘယ်လိုသုံးမလဲ Read More »
Above ရော Over ရော နှစ်ခုလုံးက “အထက်မှာ” လို့ အဓိပ္ပါယ် ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သုံးပုံခြင်း မတူပါဘူး။ Example:The snow came up above/over our knees.There’saspider on the ceiling just above/over your head. အရာဝတ္ထု တစ်ခုက အခြားတစ်ခုရဲ့ အပါ်တည့်တည့်မှာ ရှိမနေဘူးဆိုရင် Above ကို သုံးပါတယ်။ Example: We’ve gotalittle house above the lake. (Not “over the lake”) အရာဝတ္ထု တစ်ခုက အခြားတစ်ခု အပေါ်မှာ ရှိနေတယ်၊ ဖုံအုပ်ထားတယ် …
Above and Over Read More »
ကလေးကို အင်္ဂလိပ်စကား ပြောအောင် ဘယ်လို အားပေးမလဲ
ကလေးတော်တော်များများဟာ အင်္ဂလိပ်လို ပြောဖို့ ဝန်လေးကြပါတယ်။ အချို့ကလဲ ပြောရမှာ ရှက်လို့ မပြောချင်ကြဘူး။ အချို့က ပြောရင် မှားမှာကြောက်လို့ မပြောကြဘူး။ အချို့ကလဲ သူငယ်ချင်းတွေကြားမှာ အရီခံရမှာ ကြောက်တော့ မပြောချင်ကြဘူး။ မိဘတွေအနေနဲ့ ကိုယ့်ကလေး အင်္ဂလိပ်လို ပြောရဲဆိုရဲ ရှိလာအောင် အားပေးကူညီနိုင်ပါတယ်။ ကလေးက အင်္ဂလိပ်လို မပြောရင် စိတ်ပျက်တဲ့ ပုံစံ မပြပါနဲ့။ မိဘရဲ့ အချိန်ပြည့် အာရုံစိုက် ခံရတာဟာ တစ်ခါတစ်ရံ ခလေးတွေအတွက် စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်လို ပြောကျင့်မရှိတဲ့ ကလေးတွေဟာ အင်္ဂလိပ်လို စပြောရရင် စိုးရိမ်ပြီး ပြောမထွက် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကလေးရဲ့ စိုးရိမ်စိတ်ကို လျှော့နည်းစေဖို့ ကလေးကို အင်္ဂလိပ် စာလုံးတွေနဲ့ စာကြောင်းတွေကို ပြောရာမှာ ကိုယ်နဲ့ မျက်နှာ …
ကလေးကို အင်္ဂလိပ်စကား ပြောအောင် ဘယ်လို အားပေးမလဲ Read More »